Ole Gunnar Solskjaer Oo Jawaab Degdeg Ah Siiyey Frank Lampard Oo Weeraray Bruno Fernandes & Laacib Muhiim Ah Oo Seegaya Kulanka Chelsea Oo Uu Xaqiijiyey - Gool24.Net
Ole Gunnar Solskjaer Oo Jawaab Degdeg Ah Siiyey Frank Lampard Oo Weeraray Bruno Fernandes & Laacib Muhiim Ah Oo Seegaya Kulanka Chelsea Oo Uu Xaqiijiyey
July 18, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Ole Gunnar Solskjaer ayaa jawaab adag ka bixiyey hadal kasoo yeedhay tababaraha Chelsea ee Frank Lampard oo sheegay in Manchester United ay garab ka hesho garsooreyaasha iyo VAR, isla markaana farta ku fiiqay Bruno Fernandes oo uu xusay inuu yaqaano sida khiyaamo loogu helo rikoodhe aan jirin.
Lampard ayaa ciyaartoyda kooxdiisa usoo jeediyey inay ka feejignaadaan laacibiinta United ee dhaqdhaqaaqa degdegga ah sameeya, istuuristuna u dheer tahay, kuwaas oo garab ka hela VAR, laakiin Solskjaer oo isaguna warbaahinta la hadlay ayaa ka jawaabay hadalkaas.
Solskjaer waxa uu beeniyey in kooxdiisu ay saacidaad ka hesho garsooreyaasha, gaar ahaan VAR, waxaanu rumaysan yahay in Lampard iyo dadka kale ee kooxdiisa kasoo horjeeda ay isku dayayaan inay garsooreyaasha culays ku saaraan in il-gaar ah lagu eego Manchester United.
“Waxay u muuqataa inay jirto sheeko. Waxay u egtahay in dadku doonayaan inay saamayn ku yeeshaan wax kasta oo go’aan ah.” Ayuu yidhi Solskjaer oo u jawaabayay Lampard iyo Jose Mourinho oo isaguna hore u sheegay in United ay nasiib u leedahay inay ku tartanto afarta sare.
Ole Gunnar Solskjaer oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi: “Waxaan maqlayaa dad ka hadlaya nasiib, in nasiibkayagu ka badnaa inta aanu nasiibka darnayn. Haddii aad eegto go’aamada xaqiiqada ah – ma doonayo inaan u dhawaaqo sida tababareyaal gaar ah oo ka hadlayay xaqiiqada, laakiin haddii aad tahay offside, waxaad tahay offside, taasi waa caddaan.
“Ka hadalka nasiibka… rikoodhihii lana siiyey kulankii Tottenham daqiiqaddii ugu dambaysay waa lanagala noqday, kaasi laba dhibcood oo dheeraad ah ayuu nasiin lahaa. Ka hadalka kaadh cas oo ay ahayd in lasiiyo Oriol Romeu oo dacsay Mason Greenwood, haaddii casaanka la siin lahaa, waxa laga yaabaa inuu na caawin lahaa. Ka hadalka Mark Noble markii casaanka lagu saaray ciyaartii Wwest Ham, waaba la naga badiyey.”
Tababare Solskjaer waxa uu xaqiijiyey in Manchester United uu kulanka Chelsea ka maqnaan doono difaaca bidix ee Luke Shaw oo aan kasoo kabanin dhaawac kasoo gaadhay kulankii Southampton ee Isniintii, isla markaana guushii Khamiistii ay ka gaadheen Crystal Palace aan kasoo qayb gelin, laakiin waxa uu jamaahiirta Red Devils kaga farxiyey in Brandon Williams oo ay isku maalin dhaawacmeen Shaw uu taam yahay.